अन्तर्राष्ट्रिय समाचार – NepalajaMedia
एक व्यक्तिले युट्युबमा भिडियो लाइभ गरेर आफ्नो गर्लफ्रेण्डको ह त्या गरेका थिए । अहिले ती ह त्याराका साथै उनले लाइभ गरेको भिडियो हेर्नेहरुलाई समेत जे ल सजाय भएको छ । स्तानिस्लाभ रेसेत्निकोभ नाम प्रयोग गर्ने ३० वर्षका स्टास रिफ्ले नामका ती रुसी युट्युबरलाई दो षी ठहर गर्दै ६ वर्ष दुर्गममा क डा नि र्वास नपछि मृ त्युद ण्डको स जा य सुनाइएको छ । २८ वर्षकी भ्यालेन्टिना ग्रिगोर्येभालाई लाइभ अनलाइन भिडियोमा या तना दिइएको देखिएको थियो । जाँचमा उनको टाउकोमा चो ट लागेका कारण मृ त्यु भएको पाइएको थियो । उनलाई लाइभ भिडियोमा या तना दिइरहेका रेसेत्निकोभलाई भिडियो हेर्नेहरुले अरु गा ली गलौ ज गर्न र शारीरिक या तना दिनको लागि पैसा दिएका थिए । भिडियोको अन्त्यमा उनको मृ त्यु भएको थियो । आश्चर्यजनक रुपमा रेसेत्निकोभ मस्को अदालतमा उपस्थित हुँदा उनकी आमाले उनलाई कि स गरेको देखिएको थियो । यो पनि, कर्मचारीलाई को
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एक जना डाक्टरले आ, x त्म, x ह, x त्या गरेका छन्।दिल्लीको साकेतस्थित म्याक्स अस्पतालको कोरोना वार्डमा खटिएका ३५ वर्षीय डाक्टर विवेक रायले आ, x त्म, x ह, x त्या गरेका हुन्। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि विवेक निकै त, ना, वमा रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्। दिल्ली प्रहरीले विवेकलाई साडीको सहायताले पंखामा झु, x न्डि, x एको अवस्थामा फेला पारेको थियो। प्रहरीले रायको कोठामा सु, x सा, x इ, x ड नोट पनि फेला पारेको छ। नोटमा उनले आफूखुसी आ, x त्म, x ह, x त्या गरेको उल्लेख गर्नुका साथै सबैलाई सुरक्षित रहन आग्रह गरेका छन्। डा. राय पछिल्लो एक महिनादेखि कोभिड वार्डमा काम गरिरहेका थिए। भारतीय मेडिकल एसोसिएसनका पूर्व निर्देशक डा. रवी वानखेडकरले विवेक सक्षम डाक्टर भएको र उनले महामारीको समयमा सयौंको ज्यान बचाएको बताएका छन्। ‘कोरोेनाका कारण ज्
आफ्नी पत्नीको सुन बेचेर सडकमा कोरोनाले छटपटाइरहेका बिरामीलाई अक्सिजन दिने व्यक्तिविरुद्ध किन पर्‍यो उजुरी ?
बिबिसी – भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित जौनपुरको एउटा सरकारी अस्पतालबाहिर अक्सिजन अभावमा तड्पिरहेका बिरामीहरूलाई आफ्नो एम्बुलेन्सबाट अक्सिजन दिने युवकविरुद्ध स्थानीय प्रशासनले उजुरी दर्ता गरेको छ। उक्त कदमलाई कैयौँले अरूलाई सहायता गर्न चाहने मानिसलाई प्रशासनले अवरोध गर्न खोजेको रूपमा हेरिरहेका छन्। ती युवकले अस्पतालबाहिर “अव्यवस्था उत्पन्न गरेको र स्वास्थ्यकर्मीलाई समस्या भएको” प्रशासनको तर्क छ। जौनपुर जिल्लाका प्रमुख अधिकारी मनीष वर्माले बीबीसी हिन्दीसँग कुराकानी गर्दै भने, “अहिले ती युवकविरुद्ध कुनै कारबाही गरिएको छैन, एडीएमको समूहले पूरै मामिलाबारे जाँच गरिरहेको छ। प्रशासनको उद्देश्य कसैलाई बिनाकारण दण्डित गर्ने होइन।” जौनपुर कोतवालीमा विक्की अग्रहरि नामका ती युवकविरुद्ध महामारी ऐनको दफा ३ र भारतीय दण्डसंहिताको दफा १८८ तथा २६९ अनुसार जाहेरी दर्ता गरिएको छ। यो जाहेरी जौनपुरका म
‘एकैदिन गर्भको बच्चा र पत्नी गुमाएँ’ भन्दै यी ब्याक्ति अस्पतालमै पागल भएपछि… (भिडियो सहित)
भारतमा कोरोनाभाइरस महामारीको घातक दोस्रो लहरका कारण अस्पताल र मसानघाटहरूले चाप थेग्न सकेका छैनन् भने अक्सिजन तथा औषधिको व्यापक अभाव भइरहेको छ। अहिले कोरोनाभाइरस महामारीले भयावह रूप लिएको छ। महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि भारतका अस्पताल र स्वास्थ्यसेवा प्रणालीमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। भारतमा नयाँ भेरिअन्टको पनि असरले गर्दा सङ्क्रमण तथा बिरामीको मृत्यु हुने सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिहरेको छ। त्यहाँ रेकर्ड सङ्ख्यामा नयाँ सङ्क्रमितहरू फेला परे। सर्वाधिक सङ्ख्यामा दैनिक मृत्यु पनि भयो। तर सङ्क्रमणका मामिलाको अनि मृत्युको वास्तविक सङ्ख्या अधिकारीहरूले दिएकोभन्दा निकै धेरै हुनसक्छ। कैयौँ मानिसहरूले परीक्षण गराएका छैनन् वा गराउन सङ्घर्षरत छन्। ग्रामीण भेगमा भएका कैयौँ मृत्युको दर्ता पनि गरिँदैन। राजधानी दिल्लीमा चिकित्सकहरूले मानिसहरू अस्पतालबाहिर मरिरहेको विवरण दिएका छन्। देशमा सघन उ
…..त्यसपछि साइकलमा श्रीमतीको शव लिएर हिँडिरहे वृद्ध
काठमाडौं । दुई–तीन दिनअघि फेसबुकमा केही फोटो भाइरल भइरहेको थियो । उक्त फोटोमा सेतो दाह्री भएका एक वृद्ध साइकलमा एउटी महिलालाई राखेर गइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो । कुनै फोटोमा भने उनी ती महिला बोकेको साइकलछेउमा टाउको माथि हात राख्दै चिन्तित देखिरहेका थिए । ती महिला निर्जीव अर्थात पुतलाजस्ता देखिएकी थिइन्, जीवनबिनाको शरीर जस्तो । सामाजिक सञ्जालमा आएको त्यो फोटोमा धेरैले दुःखपूर्ण टिप्पणी गरेका थिए । उक्त फोटो भारत, उत्तर प्रदेशको जौनपुर जिल्लास्थित मडियाहु थाना क्षेत्रको अंबरपुर गाउँको हो । फोटोमा देखिएका व्यक्ति स्थानीय ५५ वर्षीय तिलकधारी सिंह र उनकी मृत श्रीमती राजकुमारी देवी हुन् । राजकुमारीको मंगलबार जौनवुरको सदर अस्पतालबाहिर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भयो । सरकारी एम्बुलेन्सले उनको मृत शरीर गाउँसम्म पु¥याइदियो । तर, कोरोनाको डरका कारण उनको अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुन गाउँका कोही आएन
एजेन्सी । पूरै भारत देश अक्सिजनको कमीको साथ र्सघर्ष गर्दैछ। अक्सिजनको अभावमा मर्ने व्यक्तिको रिपोर्ट लगातार आउँदैछ। जब कोरोना संक्रमित महिलाले बहराइचको अस्पतालमा अक्सिजन नपाएपछि असहाय छोरीले उनको मुखबाट अक्सिजन दिने प्रयास गरिन्। यो भिडियो धेरै भाइरल भइरहेको छ। त्यहाँ कोरोना बिरामीहरु अक्सिजनको कारण छट्पटिरहेको भिडियोहरु भाइरल भइरहेको दृश्य देखिन्छ । यस्तै एक दृश्य युपीको बहराइचमा अक्सिजनको कमी भएपछि भाइरल भएको छ। भारतको यूपीको बहराइचको अस्पतालको भाइरल भिडियोमा बिरामी आमालाई छोरीको मुखबाट अक्सिजन दिइरहेको देखाइएको छ। कोभिड १९ को दोस्रो चरणमा भारतमा अक्सिजनको अभावले मृत्युको बीचमा बहराइचमा अक्सिजनको कमीका कारण बिरामीहरू कत्ति भाइरल हुन्छन् ? यो भाइरल भिडियोमा स्पष्ट देखिन्छ। आफ्नो आमालाई गाह्रो भएपछि सन्तान आफ्नो जीवनको बलिदान दिन पनि पछि हट्दैनन् । यस्तै भयो युपीमा पनि । त्यहाँ एक
यी युवक अस्पताल बाहिर कोरोना भएकालाई निशुल्क अक्सिजन सिलिण्डर दिइरहेका थिए, प्रहरीले तत्काल गर्यो पक्राउ
बीबीसी । भारतमा कोरोनाको दोश्रो लहरसँग अक्सिजन र अस्पतालमा उपचारकाृ चरम अभाव भएको छ । यस्तैमा उत्तर प्रदेश राज्यस्थित जौनपुरको एउटा सरकारी अस्पतालबाहिर अक्सिजन अभावमा त ड्पि रहेका बिरामीहरूलाई आफ्नो एम्बुलेन्सबाट अक्सिजन दिने युवकविरुद्ध स्थानीय प्रशासनले उजुरी दर्ता गरेको छ । उक्त कदमलाई कैयौँले अरूलाई सहायता गर्न चाहने मानिसलाई प्रशासनले अवरोध गर्न खोजेको रूपमा हेरिरहेका छन् । ती युवकले अस्पतालबाहिर अव्यवस्था उत्पन्न गरेको र स्वास्थ्यकर्मीलाई समस्या भएको प्रशासनको तर्क छ । जौनपुर जिल्लाका प्रमुख अधिकारी मनीष वर्माले बीबीसी हिन्दीसँग कुराकानी गर्दै भने, अहिले ती युवकविरुद्ध कुनै कारबाही गरिएको छैन, एडीएमको समूहले पूरै मामिलाबारे जाँच गरिरहेको छ । प्रशासनको उद्देश्य कसैलाई बिनाकारण दण्डित गर्ने होइन। जौनपुर कोतवालीमा विक्की अग्रहरि नामका ती युवकविरुद्ध म हा मा री ऐनको दफा ३ र भारतीय
काठमाडौँ । भारतको उत्तर प्रदेशको बिजनोरमा कोरोनाले ७२ घण्टाभित्रै बेहुलीको खुसी खोसेर लगेको छ। कोरोनाका कारण ती बेहुलाको २ दिनभित्रै ज्यान गयो जसले भर्खरै बेहुली बिहे गरेर ल्याएका थिए। बिहेकै दिन बेलुका ज्वरो आएका कारण सोही रात उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो र उपचारको क्रममा अर्जुन नाम गरेका ती बेहुलाको ज्यान गयो । जूमन्यूजका अनुसार बिजनोर सहरको जाटन निवासी अर्जुनले अप्रिल २५ का दिन चन्दपुरको सियाउ गाउँ निवासी बबलीसँग विवाह गरेका थिए। अप्रिल २५ का दिन अर्जुन जन्ती लिएर गएका थिए र धुमधामका साथ बिहे सम्पन्न भएको थियो। बेलुका ७ बजेतिर बेहुलीसँग जन्तीलाई विदा गरेर पठाइएको थियो। जन्ती खुसीसाथ बिजनोर पुगेका थिए र त्यहाँ बेहुलीको पनि धुमधामका साथ स्वागत गरिएको थियो। तर, त्यही रात सुहागरातका बेला बेहुला अर्जुनलाई अचानक ज्वरो आयो र ज्वरो पनि बढ्दै गयो।अर्जुनलाई हतार हतार जिल्ला सरकारी अस्
भारतमा कोरोनाको चपेटामा सर्वसाधारण देखी नेता तथा कलाकार सम्म अछुतो रहन सकेका छैनन् ।कुनै न कुनै माध्यमबाट उनीहरु पनि संक्रमित भई नै रहेका छन् ।यसै सन्दर्भमा साउथका सुपरस्टार अल्लु अर्जुन समेत कोरोना संक्रमित भएका छन् । उनले आफुलाई कोरोना पोजेटिभ भएको आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका छन् ।अल्लु खर्जुनले एक ट्विट गर्दै यो खबर आफ्ना फ्यानहरु माझ सार्वजनिक गरेका हुन् । कोरोना पोजेटिभ आए संगै उनले आफुलाई क्वारेण्टिनमा राखेका छन् । उनले लेखेका छन् – सबैलाई नमस्कार । मेरो कोरोना परिक्षण पोजेटिभ आएको छ । मैले आफुलाई अलग्गै राखेको छु । म उनीहरु संग यो अनुरोध गर्दछु कि जो मेरो सम्पर्कमा आएका छन् आफ्नो ख्याल गर्दै कोरोना परिक्षण गराउन् ।उनले आफ्ना शुभचिन्तकहरुमा चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै आफु उपचारमा रहेको बताएका छन् ।
एजेन्सी । केहि दिन यता भारतमा कोरोना भाइरसले भयावह रुप लिएको छ । पछिल्लो समय हस्पिटलमा बेड र अक्सिजन नपाएर धेरै कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । गए राति कोरोना संक्रमणबाट श्रीमानको मृत्यु गलतै उनि श्रीमतीले झु ण्डि एर देह त्या ग ग रेकी छन् । भारतको मध्य प्रदेश राज्यको इन्दौर जिल्लाको राजेन्द्र नगर बस्ने नेहा पंवारले श्रीमानको मृत्युको खबर सहन नसकेर आफ्नै कोठको पंखामा देह त्या ग ग रेकी हुन् । यो जोडी १८ वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका थिए । तर यो विवाह धेरै बर्ष टेक्न सकेन । उनीहरुले धेरै सपना बोकेका थिए तर ति सपना कोरोनाले चकनाचुर भनाइ दिएकोक छ। आज भन्दा १५ दिन अगाढि उनीलाइ कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । उपचारको लागि इन्दौरको एक निजी अस्पतालमा बुधबार राति मृत्यु भएको थियो । प्रोफेर नेहा र डिप्टी रेन्जर पवनबीच पाँच वर्ष अगाडि विवाह भएको थियो ।